Isilimela 1, 2018 admin
Ingxelo Daily Market Kraken for 01.06.2018
$128M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje
Huobi ukwethula crypto ETF
platform Cryptocurrency trading Huobi isungula fund Exchange-wasebenza crypto-based (ETF), mali ukhetho eya kuvumela abatyali-ngemiyinge emincinci ukuze bafumane utyhileko nengobozi-asethi kunokuba nje omnye ngexesha.
Isixhobo mali, ebizwa HB10, ngoku vula nezikhokhelo akayamkeli kuphela ukuthenga usebenzisa cryptocurrencies, endaweni ezimali eyake.
Le nkampani ngakumbi wongezelela ukuba ekubeni imveliso iza kufumaneka kubatyali-mali yamaziko, it kungase “ukunciphisa ifuthe lokungena lweziko kunye nokuphuma” ku cryptocurrencies eyodwa.
YeMfuzo uqala app mobile ikuvumela nabadlala imali Bitcoin
Japanese technology beqinile yeMfuzo Group Internet iqulunqe app entsha mobile okuvumela abasebenzisi imali Bitcoin nje ngokudlala imidlalo.
Le app entsha - ebizwa CryptoChips - siza kuhlanganiswa ne-time indawo umdlalo idabi yaphuhliswa yeMfuzo ebizwa “War ehlekisayo.”
Le ngxilimbela tech uthe ithemba ukukhuthaza uluntu ukuba baqhelane cryptocurrencies nge app entsha, kuba abasebenzisi kuya kufuneka ukuba basebenzise izipaji zabo digital ukufumana nokusebenzisa Bitcoin.
Singapore usomashishini othenga onemvume Japanese exchange crypto for $ 67M
Eric Cheng, a Umrhwebi real estate ngempumelelo, iye yafumana 100% kota ku Japanese FX FSA-mvume Trade Financial Co., Ltd, iqonga FX trading, kwakunye BitTrade, iqonga cryptocurrency urhwebo mvume izinze Japan.
Yena ufuna kwisikali ngamandla iqonga yorhwebo ibe inkulu e-Japan & engase ukwandisa iinkonzo jikelele.
Eric Cheng uba owasemzini wokuqala ukuba ngumnikazi 100% kota ku iqonga cryptocurrency yorhwebo Japanese FSA-mvume
ukunyuka Square ngokwexabiso ngu $ 8B ukususela ngokudibanisa Bitcoin urhwebo kunyaka ophelileyo
Izabelo of Square Inc. ukuba ngaphezu kabini ixabiso kunyaka odlulileyo.
stock Ingabinani Intlawulo iye inyuke phantse 50%, oqhube ngayo $8 billion ngokwexabiso lemarike, kuba kunatyiselwa Bitcoin yorhwebo ngoNovemba kubathengi ayo Cash App, ekuvumela abasebenzisi imali kubahlobo kunye nosapho.
esemthethweni IMF ubongoza iiBhanki ezingoovimba ukuba akhuphisane cryptocurrencies
A igosa eliphezulu kwi-International Monetary Fund (IMF) isibongoza iiBhanki ezingoovimba ukuphuhlisa iimali "ngcono" alibhekiseli ukwenzela ukugcina isantya labo nobunkokheli phezu cryptocurrency.
IMF usekela mlawuli Dong Wenza tyala "asethi crypto ukuze ngenye imini kunciphisa imfuno imali ebhankini engundoqo" yaye amaziko karhulumente kufuneka senze okungakumbi ukuze avumele ukuba kwenzeke. Ngamanye amazwi, ukuba 'aphephe uxinzelelo zokhuphiswano asethi crypto anokumenza kwi ezimali eyake,"IiBhanki ezingoovimba kufuneka yamkele ezinye iikhonsepthi ezingundoqo uqhuba asethi digital.
Indlela ukwamkela kwi cryptotrading intraday?
imimiselo crypto a ...
Binance silungele en ...
Post Previous:Blockchain News 31.05.2018
Post Next:Blockchain News 02.06.2018
Isilimela 10, 2018 e 2:37 AM